Tora-pasika tsara indrindra any Ibiza | Vaovao momba ny dia
Tora-pasika tsara indrindra any Ibiza
Mariela Carril | 28/09/2021 17:00 | Ibiza, tora-pasika
Ibiza Any amin'ny Ranomasina Mediterane izy ary ao amin'ny Nosy Balearic, manana 210 kilometatra ny morontsiraka ary ny sasany amin'ireo morontsiraka malaza sy tsara indrindra any Espana. Fantatrao ve izy ireo? Tsy hitanao ve ny fotoana hahatongavan'ny fahavaratra 2022 hankafizan'izy ireo?
Androany, ao amin'ny Actualidad Viajes dia fantatsika ny morontsiraka tsara indrindra any Ibiza ka manomàna pointer ... sy ny valizy!
2 Tora-pasika tsara indrindra any Ibiza
Miaraka amin'i Menorca, Mallorca ary Formentera dia ao amin'ny Nosy Balearic. Ny coves sy ny morontsirak'izy ireo dia nofinofy, saingy toy izany koa ny tontolon'ny fizahan-tany sy fialan-tsasatra iray izay namboarina nandritra ny taona maro. Androany, Ibiza dia mitovy amin'ny fety.
Ibiza dia 79 kilometatra miala ny morontsiraka kaontinantaly, manana a toetr'andro mafana ary niaritra fifindra-monina lehibe tamin'ny taonjato faha-XNUMX izy. Betsaka ny mponina ao aminy, notafihan'ny fahantrana, no niampita ny ranomasina nankany Algeria sy Cuba. Tany amin'ny taonjato faharoa-polo dia manodidina ny taona maro '60 sy '70, rehefa nanomboka nitombo ny fizahan-tany ary namokatra ny fivoarany.
Androany hoy ianao Ibiza dia hoy ianao fiainana amin'ny alina, fety, disko, morontsiraka ary tanora.
Izy ireo dia isaina manodidina 80 morontsiraka eo amin'ny morontsirak'i Ibiza ary misy zavatra kely rehetra, manomboka amin'ny morontsiraka mangina sy milamina ary lavitra hatrany amin'ny torapasika mahazatra, bay kely, morontsiraka fasika ary morontsiraka tena velona.
Any atsinanana misy a tora-pasika tena malaza sy mahazatra satria manana rano milamina tsara izy ho an'ny ankizy, ankoatry ny fivarotana sy trano fisakafoanana manodidina azy. Miresaka momba ny Cala Llonga, miaraka amin'ny fasika volamena sy ny endrika andohalambo. Eto ianao dia afaka milentika masoandro, mianatra milentika, milalao volley an-dranomasina ary maro hafa.
Ny morontsiraka izay akaiky indrindra ny tanànan'i Ibiza dia izy Talamanca, misy fasika volamena sy sambo hazo. Matetika ny mpitsangatsangana sy ny mponina no mitsidika azy io, misy trano fisakafoanana misy vidiny masira ary izany no izy tototry ny tanora tokoa rehefa avy nanao clubbing. Mety hieritreritra an'izany ianao satria akaikin'ny renivohitra dia misy sooo be olona fa tsy toy izany, indrindra ny maraina na ny hariva be.
Ny atsimo dia La Salinas, ny morontsiraka fety indrindra any Ibiza (na hoy izy ireo). eFA trano fandihizanaMisy foana ny tanora, afaka mandihy amin'ny fasika foana ianao, misakafo atoandro, misakafo hariva na miala sasatra. Mba ho tony kokoa sy hankafy ny natiora, dia ny toeran'ny Valan-javaboary Las Salinas Tsara ihany koa ny mandeha an-tongotra mankany amin'ny tilikambo fandinihana any amin'ny faran'ny atsimo indrindra amin'ny nosy satria misy vala kely any.
Cala d'Hort dia avy any fasika volamena ary manana fahitana mahafinaritra ny nosy Es Vedra, eo amin'ny faravodilanitra, metatra vitsivitsy miala ny morontsiraka. Misy sambo, yachts, ary amin'ny vanim-potoana avo dia misy izany olona milay be mankafy ireo trano fisakafoanana, mandeha ary mivoaka amin'ireo sambo mitafo amin'ny ranomasina.
La Playa d'en Bossa tena midadasika izy io, raha ny marina ny morontsiraka lava indrindra any Ibiza ary manana ny klioba malaza indrindra rehetra, ankoatry ny hafa izay be dia be manodidina. Manomboka amin'ny disko ny alina fa mitohy amoron-dranomasina matetika.
Any andrefan'ny nosy dia Cala Conta, iray amin'ireo tsara tarehy indrindra ho an'ny maro. Manana fasika fotsy malefaka sy rano madio izy, tsara tarehy nefa misy olona foana. Azonao atao ny mandeha amin'ny tolakandro ary mijanona misaintsaina ny filentehan'ny masoandro tsara tarehy sy volamena na snorkel ao amin'ny dobo voajanahary amoron-tsiraka, eo anelanelan'ny vatolampy ...
Cala Saladeta dia perla iray hafa ao amin'ny morontsiraka andrefana, ary raha te ho tonga eo dia tsy maintsy miampita vato vitsivitsy ianao. Helodrano kely misy fasika volamena sy rano madio mangarahara izy io. Ireo olona ho hitanao dia tanora matetika ary mitondra ny sakafony sy misotro azy ireo handany ny andro tsy misy bara amoron-dranomasina eo imasony. Mazava ho azy fa toa lafo ny zava-pisotro. Ary koa amin'ny morontsiraka andrefana dia ny Cala Tarida, amoron-dranomasina matetika misy fianakaviana ary koa mpizahatany sy mponina ao an-toerana ary mpivady.
Ao amin'ny Cala Tarida misy disko, trano fisakafoanana, rano milamina sy madio, ny akora rehetra ka amin'ny fahavaratra dia morontsiraka mipoaka ara-bakiteny. Raha tianao ny zavatra mangina kokoa, dia tokony hianatsimo ianao ary misy coves kely kokoa.
Ary ny morontsiraka avaratra? Indro misy Rano fotsy, morontsiraka fasika fotsy voahodidin'ny hantsana mahavariana. Dia a morontsiraka naturista ary ny olona eo an-toerana dia mirona any amin'ny tendrony atsimon'ny morontsiraka. Rehefa misy rivotra, dia miorina onja kely, miaraka amin'ny tampon-trondro fotsy, ka io no anarany. Toerana tsara hahitana ny fiposahan'ny masoandro.
Amin'ny morontsiraka avaratra koa dia misy ny Tora-pasika Benirras, voahodidin'ny hantsam-bato sy kesika, eo anelanelan'ny fasika, vatokely ary vato. Ny rano, tena madio sy tsara ho an'ny snorkeling. Morontsirak'i Rantsan-tanan'Andriamanitra ary ny masoandro mody dia zavatra avy amin'ny tontolo hafa. Nambaran'izy ireo fa ny andro tsara indrindra handehanana any amoron-dranomasina ity dia ny alahady rehefa alamina ny tsena eo an-toerana. Amin'ny vanim-potoana lehibe dia tonga ny bisy ary tsy azo atao ny mitondra fiara satria mihidy ny lalana.
La Cala Jondal Izy io dia cove voajanahary voahodidin'ny natiora mahafinaritra, miaraka amin'ny hazo kesika sy trano tsara tarehy. ity ny Alim-pandihizana manga Marlin, izay alehan'ny olo-malaza maro. Morontsiraka vatokely izy io ary lamaody fatratra raha ny amin'ny sakafo, fisotroana, fialamboly ary ho hita. Cove malaza iray hafa ho an'ny disko-ny Cala Bassa, misy fasika fotsy ary saika postal. Ity ny Cala Bassa Beach Club, hihinana sy hisotro ary handihy.
Afaka tonga any Cala Bassa mora ianao ao anatin'ny 15 minitra avy any San Antonio mampiasa bus 7. Cala Xuclá dia iray amin'ireo morontsiraka kely indrindra ary namboarina indrindra teto amin'ny nosy. Tsy misy bara, tsy misy fandroana, ary tsy misy hetsika atolotra. Morontsiraka mangina sy mangina izy io, voahodidin'ny hazo kesika, miaraka amina sambo fanjonoana ary a rivo-piainana tena ambanivohitra.
Sa Caleta Morontsiraka izy io voahodidina vatolampy menaMampatsiahy ny Grand Canyon any Colorado izy ireo, any Etazonia. Ity morontsiraka ity dia 15 minitra monja miala ny tanànan'ny Ibiza. Manana rano milamina izy ary noho izany antony izany dia mahazatra azy io, ary misy trano fisakafoanana malaza manompo trondro sy hazan-dranomasina matsiro. Malaza ny moron-dranomasina nefa manome azy ireo tsiambaratelo ny harambato.
Mazava ho azy fa tsy ireo ihany Torapasika IbizaBetsaka ny hafa, koa raha te hahalala azy ireo ianao ary miaina ny traikefa Ibiza ... aza adino ny 20222!
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao momba ny dia » Tanànan'ny Espana » Ibiza » Tora-pasika tsara indrindra any Ibiza
Tempolin'i Megalithic any Malta
Fomba amam-panao italianina